तीन दलको सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको प्रयास सुरु, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने ! – News Nepali Dainik
तीन दलको सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको प्रयास सुरु, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने !
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १२, २०७७ समय: १३:५८:५६
सर्वोच्चको फैसला पछि नेकपामा अब सरकार गठनको लागि नयाँ समिकरणको प्रयास सुरु भइसकेको छ । आन्दोलनरत नेकपाका प्रचण्ड माधव समुहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल राजिनामा दिन माग गरेका छन् । अहिले सम्म कुनै पक्षमा नखुलेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि ओलीलाई राजिनामा दिन सुझाव दिएका छन् ।
ओलीलाई राजिनामा गराएर अब नयाँ सरकार गठनको तयारीमा प्रचण्ड नेपाल समुह लागेका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । नेकपाको कुनै पनि समुहले एक्लै सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले कांग्रेस र जसपाको साथ आवश्यक छ । अब यि दुई पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास सुरु भएको हो ।
ओलीसंग राजिनामा माग गरेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समुहले नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टिलगायतका दलहरुलाई मिलाएर प्याकेजमा सहमति गर्नेबारे छलफल बढाएको बुझिएको छ । चितवनमा रहेका प्रचण्डले टेलिफोनमा देउवासंग कुरा गरेर तत्काल भेटघाट गर्ने समय तय गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजीनामा गर्न वा ध्य पार्ने या महाभियोग सम्म लगाउने तयारी भइसकेको छ । तर प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई हटाउने बारे आफुहरुले नसोचेको प्रतिकृया सार्वजनिक रुपमा दिइसकेका छन् । उनले अब नेकपावाट नभई वाहिरवाट प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर अन्य पार्टीसंग प्याकेजमा सहमति गर्दा राष्ट्रपति पनि बाँड्नुपर्ने अवस्था आएमा काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने विकल्पवारे पनि छलफल हुनथालेको बताइएको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेमा राष्ट्रपति नेकपाले राख्ने पनि हुनसक्ने बताइएको छ । तीन दलको सहमतिको सरकारमा मन्त्रीहरुको भागवण्डा देखि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे समेत टुंगो लगाउने गरी अनौपचारिक कुराकानी बढिसकेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गठबन्धनको सम्भावनाबारे पनि छलफल बढेको छ । यस अघि नै ओलीले देउवासंग भेटघाट र छलफल गरिसकेका छन् । देउवाले सार्वजनिक रुपमा ओलीको कदम असंवैधानिक समेत भनेका थिएनन् ।
Last Updated on: February 24th, 2021 at 1:58 pm